YEYINTNGE(CANADA): The Voice Weekly ၏ CEO ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် (ခ) အောင်ထွဋ် ကွယ်လွန်
The Voice Weekly ၏ CEO ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် (ခ) အောင်ထွဋ် ကွယ်လွန်
Sunday, 01 January 2012 02:38
ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (၁၉၆၂ - ၂၀၁၂) ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
by The Voice Weekly on Saturday, December 31, 2011 at 4:21pm
၂၀၁၂ ကို ကျောခိုင်းသွားသူ အောင်ထွဋ်
အမည်ရင်း » နေဝင်းမောင်
ကလောင်အမည် » အောင်ထွဋ်၊ ကျော်စွာ၊ အခြားကလောင် အမည်များစွာနှင့် စာရေးသည်။
မွေးသက္ကရာဇ် » ၁၉၆၂ ခုနှစ်
ပညာအရည်အချင်း » ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်မှ M.B.,B.S ဘွဲ့ ရရှိ၍ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု YALE တက္ကသိုလ် World Fellows Program တွင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘာသာအထူးပြုဖြင့် Fellowship ရရှိ။
1. Founder/ Chief Executive/ Policy Director/ Writer (Living Color Media & The Voice Weekly)
2. Founder/ Secretary General (Myanmar Egress)
3. Program Director/ Faculty/ Training Expert (Myanmar Egress Capacity Development Center)
4. Founder/ Board of Governors (Network Activities Group (Myanmar))
(အပြောင်းအလဲအတွက် လူထုလိုသည် စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း)
၂၀၁၂ ကို ကျောခိုင်းသွားသူ ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (အောင်ထွဋ်) ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် တွေ့ရစဉ်
(ဓါတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ဒုတိယဗိုလ်မှုကြီးသန်းမောင် (ငြိမ်း)နှင့် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်တို့၏ သားဖြစ်သူ The Voice Weekly ၏ CEO နှင့် Myanmar Egress ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သည် ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်တွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါ။ အခုအချိန်မှာ မမြင်တွေ အကုန်လုံးမတူကြပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် တိုင်းပြည်အတွက် လူတော်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားတာပါ။" ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင် မွေးဖွားသူဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် (၅၀)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ကာ ဇနီးနှင့် သမီးလေးဦး ကျန်ရစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/31/2011
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ က အကျဉ်းထောင်တွင်း ...
စင်ကာပူနိုင်ငံ ပင်နီစူလာလာပလာဇာရှိ ဟွန်ဒီငွေလဲဈေ...
" အဲဒီအခန်းဖြတ် " ဇာတ်ကား လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်...
The Voice Weekly ၏ CEO ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် (ခ) အောင...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ပါတီမှတ်ပုံတင် စောင့...
ပညာရေးရန်ပုံငွေပွဲ သိန်း ၃၅ဝ ကျော် ရရှိ
ခိုကိုးရာမဲ့သူတို့ လက်ကိုကိုင်ပြီး ခွန်အားပေးခဲ့သူ
၂၁.၅.၉၂ ပါချောင်စခန်းမှ ၅၅ဦး အကြောင်းလုပ်သားသတင်း...